MGM Resorts gbara akwụkwọ maka ụgwọ ezumike ego
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Resorts » MGM Resorts gbara akwụkwọ maka ụgwọ ezumike ego
Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Resorts • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ndị njem MGM na-agba MGM Resorts International akwụkwọ maka na ha na-akwụ ndị ahịa ụgwọ ego aghụghọ na-emebi iwu nke Usoro Iwu Ndị Ahịa nke District nke Columbia (CPPA).
Ọtụtụ MGM na-ekwu na ụgwọ ezumike ahụ na-akwụ ụgwọ maka ọtụtụ ihe eji enyere ndụ aka mana n'oge ọrịa COVID-19.
Ikpe ahụ na-ekwu na ụgwọ ezumike bụ mmebi nke iwu nchebe ndị ahịa District nke Columbia.
Ndị Njem United na-ekwu na ọnụego ụlọ mgbasa ozi n'egosighi ụgwọ a chọrọ bụ mgbasa ozi ụgha.
Ihe ga-esi na ya pụta bụ ihe dị mkpa dịka ihe onwunwe MGM ọ bụla dị na United States na-akwụ ụgwọ ụgwọ ego.
Ọtụtụ MGM na-ekwu na ụgwọ ezumike ahụ na-akwụ ụgwọ maka ọtụtụ ihe eji enyere ndụ aka mana n'oge ọrịa COVID-19, ọtụtụ n'ime ihe ndị ahụ belatara ma ọ bụ kpochapụ. Na agbanyeghị nke a, MGM agbataghị ọnụahịa nke ụgwọ ụlọ ezumike ha. Nke a gosiri na o doro anya na enweghi mmekọrịta dị n'etiti ihe eji enyere ndụ aka na ụgwọ ezumike. Ego ezumike na-enyere ndị ụlọ nkwari akụ aka ịgha ụgha banyere ọnụahịa ụlọ a kpọsara.
All MGM Njirimara na United States na-ana ego maka ụgwọ ezumike ma ha dị na National Harbor, Las Vegas, ma ọ bụ Detroit. Enweghị mmekorita ya na ụlọ nkwari akụ ahụ ịnọ na ebe ezumike na ịkwụ ụgwọ ụgwọ ezumike.
Njem United ogologo oge rụrụ ụka na hotels na-akwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ ezumike na-eme nke a megidere iwu. Mkpesa nke ndị Njem United gbara akwụkwọ na-ekwu banyere aghụghọ izugbe nke ego ezumike na mgbakwunye na iwu na-akwadoghị nke ụgwọ ezumike a na-ebo ebubo na ọnụ ụlọ "agbakọ". Ikpe ahụ na-ekwukwa na ndị na-akwụ ụtụ isi na DC na-emetụta ụgwọ ndị a na-akwụghị ụgwọ mgbe ndị isi gọọmentị na-anọ n'ụlọ nkwari akụ MGM maka ọrụ.
Ndị njem United na-achọ nkwụsị ozugbo maka ịkwụ ụgwọ ụgwọ ụlọ nkwari akụ nye ndị bi na mpaghara ọ bụla MGM na United States. Nke a ga-agụnye ntaramahụhụ ego a kwụrụ maka ndị bi na mpaghara na-akwụ ụgwọ ụgwọ ụlọ ezumike ụlọ nkwari akụ na-ezighi ezi, nlọghachi nke ụtụ ụtụ DC na-akwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ ụlọ ezumike ụlọ nkwari akụ, yana njedebe MGM na-akpọsa ụlọ ndị nwere ọnụ ahịa ma ọ bụrụ na ha na-akwụ ụgwọ ego ezumike na " comped ”ọnụ ụlọ.
Lauren Wolfe, Onye Ndụmọdụ Maka Ndị Njem United United States kwuru, sị: “Resortgwọ ụlọ maka imebi iwu megidere iwu nchebe DC nke ndị na-azụ ahịa. Oge eruola ịkwụsị ọrụ rụrụ arụ nke ụlọ nkwari akụ ahụ. Ekwesịrị itinye ụgwọ ụlọ nkwari akụ niile dị na ọnụahịa akpọsara iji bụrụ nke iwu. Omume aghụghọ MGM nke ịkwụ ụgwọ ụgwọ ụlọ oriri na nkwari akụ ga-akwụsị. ”
Ndị Njem United bụ ụtụ isi na-abụghị ụtụ isi ma e wezụga nzukọ 501 (c) (3) nke ebumnuche ha bụ ịchọpụta na ịkwalite ụzọ iji melite ma melite njem maka ndị ahịa n'ofe usoro njem niile.